७९ वर्षीया बोल्न नसक्ने अपाङ्ग वृद्धा बलात्कार गर्ने युवक जेल चलान | Rajmarga
७९ वर्षीया बोल्न नसक्ने अपाङ्ग वृद्धा बलात्कार गर्ने युवक जेल चलान
पर्वत। वाक्य नभएकी तथा अपांगता भएकी ७९ वर्षीया वृद्धा बलात्कारमा आरोपित युवा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका छन् ।
Previous post: दुई कोरियाबीचको उच्चस्तरीय वार्ता रद्द, ट्रम्पसँगको भेट अनिश्चित, किन पछि हट्यो उत्तर कोरिया ?
Next post: मन बहलाउने हो ? यो सहरमा मात्र दश रुपैयाँमा पाइन्छ भाडामा गर्लफ्रेन्ड !
श्रीमतीसँग यौन सम्पर्क गरेको भिडियो पोर्न साइटमा भेटिएपछि